कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय !
कोरोना भाइरसको महामारी ह्वात्तै बढेपछि धरान उपमहानरपालिले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा नै संक्रमण देखिएपछि २० वटै वडा कार्यालय र उपमहानगरको अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको हो ।उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएपछि आजदेखि २८ गतेसम्म सेवा बन्द गरिने निर्णय भएको उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईले बताए ।
बजारमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन कडाइ गरिने राईले बताए । चाडपर्वको समयमा लकडाउन गर्दा समस्या हुने भन्दै तत्काल लकडाउन भने नगरिने उनले जानकारी दिए ।यस्तै यता कोरोना संक्रमणको दर दिनानुदिन हजारौंको संख्यामा बढिरहँदा त्यसविरुद्धको व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी फितलो बन्दै गइरहेको भन्दै चिकित्सक तथा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संक्रमण बढिरहँदा राजधानी काठमाडौंलगायत मुलुकका अन्य सहर र गाउँहरूमा समेत संक्रमणको अवस्था भयावह बन्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाएका छन् ।
सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघिसक्दासमेत संक्रमितलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम बनाउन नसकेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले राजधानी काठमाडौं नै कोरोना संक्रमणको ‘इपिसेन्टर’ बन्दै गइरहेको भन्दै अवस्था झनै खराब आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार एकै दिन ३ हजार ४ सय ३९ जना संक्रमित थपिएका छन् । यो क्रम अझै बढेर जान सक्ने चिकित्सकले औंल्याएका छन् । कोरोना संक्रमणको उद्गम मानिएको चीनको वुहानबाट फर्किएका कोरोना भाइरस सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा। रमेशकुमार आचार्यले सरकारको फितलो व्यवस्थापनका कारण संक्रमणको अवस्था अझै बढेर जाने र खराब स्थिति आउने दाबी गरे ।
‘यही अवस्था रहिरहे राजधानी काठमाडांै छिट्टै कोरोना संक्रमणको इपिसेन्टर बन्न सक्छ र संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ,’ भाइरोलोजी र स्टिम सेलका वरिष्ठ अनुसन्धातासमेत रहेका डा। आचार्यले राजधानीसँग भने । उनले मानिसहरू जिल्लाबाट काठमाडौं आउने र काठमाडौंबाट जिल्ला जाने प्रवृत्ति बढिरहेकाले सहरदेखि गाउँसम्मै कोरोना संक्रमण अत्यधिक बढेर जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए ।
चिकित्सकका अनुसार यही क्रम बढ्दै गएमा सक्रिय संक्रमितलाई राख्ने आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन बेडको चरम अभाव हुनेछ र मृत्युदर अत्यधिक बढ्नेछ ।‘सरकारसँग अहिले रहेको क्षमताले प्रभावितमध्येको सानो अंशलाई समेत नधान्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यतिखेर हामीले निकै खराब अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ,’ डा। आचार्यले राजधानीसँग भने ।
डा। आचार्यले सरकारले छिटोभन्दा छिटो ४० हजार आइसोलेसन बेड, १० हजार आईसीयू बेड र २५ सयदेखि ४ हजार वटा भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए । अहिले सरकारसँग आईसीयू बेड १ हजार ५ सय ७५, भेन्टिलेटर ८ सय ७५ र आइसोलेसन बेड ६ हजार छन् ।सरकारले हालसम्म छुट्टै कोभिड अस्पतालसमेत निर्माण गर्न सकेको छैन् । सरकारले उल्टो अन्य रोगको उपचार गर्ने अस्पताललाई नै कोभिड अस्पताल बनाइदिएपछि ती अस्पतालबाटै कोभिड संक्रमण फैलिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । अबका दिनमा भने सरकारले छिटोभन्दा छिटो कोभिडको उपचार गर्ने छुट्टै अस्पतालहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले आंैल्याएका छन् ।
सरकारले कोभिड संक्रमितको परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा समेत समस्या सिर्जना भइरहेको देखिएको छ । हाल सरकारले औसतमा प्रतिदिन १२ हजारको मात्रै परीक्षण गर्दै आइरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार समुदायमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै कम्तीमा दैनिक २० देखि ३० हजार व्यक्तिको परीक्षण हुनुपर्नेमा न्यून मात्रै भएकाले संक्रमितको संख्या भित्र भित्रै अत्यधिक रूपमा फैलिसकेको छ ।
‘यही अवस्था यथावत् रहे दुई महिनाभित्रमा नेपालका कुनै पनि अस्पतालमा बिरामीले सामान्य बेडसमेत पाउनेछैनन् । आईसीयू र भेन्टिलेरको सुविधा पाउने त कुरै छैन,’ डा। आचार्यले भने ।‘सरकारले पीसीआरको दायरा बढाउनुपर्छ, कन्ट्याक्ट, ट्रेस र ट्र्याकलाई प्रवाभकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र तत्तकाल थप आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर र एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ आचार्यको सुझाव छ ।
अस्पतालहरूले भौतिक पूर्वाधार, मेडिकल इक्विपमेन्ट, पीपीई सेटको प्रशस्त मात्रामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।विज्ञ आचार्यले सात वटै अस्पतालमा १–१ हजार बेडको कोभिड विशेष अस्पताल बनाउन तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।अहिले भारतबाट तथा अन्य तेस्रो मुलुक र काठमाडौंबाट हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणहरू गाउँतिर जाने क्रम बढ्दो छ । ‘त्यसैले अब काठमाडौं मात्रै होइन, गाउँहरू पनि कोभिडको इपिसेन्टर बन्ने सम्भावना बढेको छ,’ आचार्यले भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
अब उपत्यकामा छैन कोभिडका बिरामी राख्ने अस्पताल
उपत्यकामा औसत १ हजारदेखि १५ सयका दरले कोरोना संक्रमण थपिँदै गएपछि कोभिड अस्पताल भरिभराउ बनेका छन् । बिरामीले बेड पाउन कि कोभिड आकस्मिक कक्षमै पर्खिनुपर्छ कि त अन्यत्र रेफर भएर जानुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।सशस्त्र प्रहरी बल बलम्बुमा कोभिड बिरामीको लागि जम्मा १ सय २० बेड र २० वटा आइसियु छन् । आइसियु र अन्य बेड सबै भरिभराउ छन् । अस्पतालले यतिखेर लक्षण भएका बिरामी मात्र भर्ना गरेको छ। तर नयाँ भर्नाका लागि पुराना बिरामी डिस्चार्ज हुनुपर्ने अवस्था छ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड–१९ का बिरामीका लागि रहेका १ सय २९ वेड र २१ वटा आइसियु पनि भरिभराउ छन् । यस्तै शिक्षण अस्पतालमा पनि कोभिडका लागि १ सय २६ बेड छन् । तीमध्ये १ सय ३ वटा भरिइसकेका छन् । बाँकी २३ वटा शंकास्पद र आकस्मिकतथा बालबालिकाको लागि छुट्टयाइएका हुन् । भर्ना भएका सबै बिरामी गम्भीर प्रकृतिका रहेको अस्पतालका कोडिभ सम्पर्क व्यक्ति डा। सवीन थपलियाले बताए ।
कोभिडका मात्र बिरामी उपचार गर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा पनि बेड खाली नरहेको अस्पतालका निर्देशक डा। सागरराज भण्डारीले बताए। भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत गम्भीर लक्षण भएका रहेको उनले बताए । यो अस्पतालमा कोभिड १९ को लागि २० आइसियु र ३० बेड छन् । ‘दिनमा दुईरतीन जना डिस्चार्ज हुन्छन्, तुरुन्त भरिन्छन्,’ उनले भने ।
राजधानीका मुख्य कोभिड अस्पतालहरु भरिएपछि बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार नियमित पे्रस ब्रिफिङकै क्रममा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको जनाउँदै सबै निजी तथा सरकारी अस्पताललाई कोभिड १९ को उपचार गर्न अनुरोध ग रे।नेपालमा २५ हजार सक्रिय संक्रमितको उपचार गर्ने क्षमता रहेकोमा बुधबार यो संख्या २५ हजार नाघेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।